BelaCoin စျေး - အွန်လိုင်း BELA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BelaCoin (BELA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BelaCoin (BELA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BelaCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $157 748.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BelaCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BelaCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BelaCoinBELA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0921BelaCoinBELA သို့ ယူရိုEUR€0.0782BelaCoinBELA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0706BelaCoinBELA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0841BelaCoinBELA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.835BelaCoinBELA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.582BelaCoinBELA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.06BelaCoinBELA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.345BelaCoinBELA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.123BelaCoinBELA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.129BelaCoinBELA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.06BelaCoinBELA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.714BelaCoinBELA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.5BelaCoinBELA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹6.91BelaCoinBELA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.15.53BelaCoinBELA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.126BelaCoinBELA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.14BelaCoinBELA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.87BelaCoinBELA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.642BelaCoinBELA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥9.75BelaCoinBELA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩109.5BelaCoinBELA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦35.37BelaCoinBELA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽6.79BelaCoinBELA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.55
BelaCoinBELA သို့ BitcoinBTC0.000008 BelaCoinBELA သို့ EthereumETH0.000237 BelaCoinBELA သို့ LitecoinLTC0.00162 BelaCoinBELA သို့ DigitalCashDASH0.000947 BelaCoinBELA သို့ MoneroXMR0.000992 BelaCoinBELA သို့ NxtNXT6.8 BelaCoinBELA သို့ Ethereum ClassicETC0.0134 BelaCoinBELA သို့ DogecoinDOGE27.2 BelaCoinBELA သို့ ZCashZEC0.001 BelaCoinBELA သို့ BitsharesBTS3.54 BelaCoinBELA သို့ DigiByteDGB3.14 BelaCoinBELA သို့ RippleXRP0.32 BelaCoinBELA သို့ BitcoinDarkBTCD0.00314 BelaCoinBELA သို့ PeerCoinPPC0.304 BelaCoinBELA သို့ CraigsCoinCRAIG41.52 BelaCoinBELA သို့ BitstakeXBS3.89 BelaCoinBELA သို့ PayCoinXPY1.59 BelaCoinBELA သို့ ProsperCoinPRC11.43 BelaCoinBELA သို့ YbCoinYBC0.00005 BelaCoinBELA သို့ DarkKushDANK29.22 BelaCoinBELA သို့ GiveCoinGIVE197.2 BelaCoinBELA သို့ KoboCoinKOBO20.71 BelaCoinBELA သို့ DarkTokenDT0.0848 BelaCoinBELA သို့ CETUS CoinCETI262.95